Ungazisebenzisa njani iiNtengiso zeTwitter kwiTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 443
Iintengiso ze-Twitter yindlela onokuqhuba ngayo umkhankaso wentengiso kwi-twitter. Ngalesi sixhobo, unokukhuthaza umxholo, ukuze uphucule ukufikelela kwi-brand yakho. Oku kukwavumela ukwahlulahlula phakathi kwabalandeli, kwaye ke ukufikelela kubaphulaphuli abathile.
Ukusebenza kwayo kuyafana ne-adwords kaGoogle, kodwa iintlawulo zayo zenziwa ngokusebenzisana, kusetyenziswa ifomula yeendleko, eyaziwa njenge-engagemente ngesiNgesi. Oko kubonisa ukuba uya kuhlawula njengoko abasebenzisi benxibelelana nayo.
Into oyikhuthazayo ngeentengiso ze-twitter ziya kuvela njenge "tweets ezikhuthaziweyo" kwaye ziya kubonakala usiya kubaphulaphuli obakhethileyo.
Yintoni injongo yeentengiso ze-twitter?
Ukuphucula ukubonakala kwegama lakho ngokusebenzisa imikhankaso yentengiso, eyonyusa inani labalandeli kunye nonxibelelwano.
La maphulo asekwe ekuqhubeni abasebenzisi ngokubhekisele kwisenzo esifuna ukuba basenze, emva koko, songeza ixabiso elongezelelekileyo kwinkampani enkosi ngokusasaza umxholo. Yandisa ukufikelela kwemveliso ngeentengiso.
Kutheni usebenzisa iintengiso ze-twitter?
I-Twitter yamkelwe ngesantya apho ulwazi luhanjiswa khona. Ke amaphulo ahlala esasazwa ngexesha elifutshane kakhulu.
Isantya esisebenza kwi-twitter kwimikhankaso yayo siyenza ukuba ilungele iinjongo zeshishini, enkosi naku uthungelwano olukhulu lwabasebenzisi kunye nokukwazi ukuvavanya intsebenzo ngokwamanani.
Ukudityaniswa komsebenzisi kumaphulo kunokwenzeka ngokubonisa ii-tweets ezonyuselweyo kubasebenzisi bexesha, kunye nokwenza imisebenzi efanayo neetweets ezingabhatalwanga.
I-Twitter ivumela ukuboniswa komxholo kwiintlobo ezahlukeneyo zezikrini, njengewebhu okanye izixhobo eziphathwayo kwizisombululo ezahlukeneyo.
Uyenza njani iphulo lakho?
Yiya kwimenyu esekunene efumaneka kwicala lasekhohlo lexesha leakhawunti yakho. Unokufumana icandelo "iintengiso ze-twitter" kwi "ezinye iindlela", ngokudibanisa ngewebhusayithi.
Ngokusebenzisa iapp, kuyakufuneka ufumane icandelo le "twitter ads" ngokucinezela umfanekiso weprofayile yakho, ebekwe ngaphezulu kwexesha lakho, kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Nje ukuba ungene, ithebhu entsha iya kuvulwa kwisikhangeli sakho, kunye nekhusi kanye embindini.
Kule tebhu unokukhetha ezinye iindlela ezinikezelwa liqonga lokukhetha ifayile ye Iinjongo zephulo:
Ukuqwalaselwa, ukwandisa ukufikelela kubasebenzisi
Ukuqwalaselwa; ukudlala ividiyo kunye nokuqengqeleka kwangaphambili, ukhuphelo losetyenziso, ukucofa iwebhusayithi, unxibelelwano kunye nabalandeli.
Ukusebenzisana kwakhona kunye neapp.
Umzekelo wentengiso yephulo le-Twitter.
Nje ukuba ukhethe injongo yeli phulo, kuya kufuneka uyile umxholo wephulo. Okulandelayo, siza kukubonisa umzekelo wephulo elinenjongo yokudlala ividiyo:
Kwisikrini esiphakathi ungabhala igama lomkhankaso, umthombo wemali, uhlahlo-lwabiwo mali lwemihla ngemihla kunye nephulo kunye nexesha elizakufumaneka ngalo.
Kwicala lasekhohlo lesikrini uza kubona ezinye iindlela; iqela leentengiso eziya kuhamba kunye nokukhuthaza kwaye ekugqibeleni kuphononongwe iinkcukacha zomkhankaso.
1 Yintoni injongo yeentengiso ze-twitter?
2 Kutheni usebenzisa iintengiso ze-twitter?
3 Uyenza njani iphulo lakho?
4 Umzekelo wentengiso yephulo le-Twitter.
Utshintsha njani inombolo yocingo?